Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga kumbiyuutarka digsi
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga kumbiyuutarka digsi
Waxaan ka kumbiyuutarka Disk soo ceshano kartaa Data?
Halkan waa dhibaato: Maanta marka aan ah oo ku saabsan in la furo aan disk kumbiyuutarka iyo xogta qaar ka mid ah waxa ay ka hesho, waxaan ka helay fariin ii sheegay in disk loo baahan yahay in la formatted. Waxaan isku dayay disk kumbiyuutarka la qaar ka mid ah kombiyuutarada kale. Natiijada waa isku mid. Laakiin hadda waxaan aan u qaab karo. Waxaan u baahanahay inaan dib u helo xogta aan ku sheegay in disk kumbiyuutarka. Qof i caawin kartaa fadlan?
In kastoo kumbiyuutarka disk waa qalab lagu kaydiyo jir ah xasuusta yar, waxaa weli isticmaalaan qaar ka mid ah dadka isticmaala maalmahan. Arrimaha kumbiyuutarka khasaaro xogta sidoo kale waa dhibaato caadi ah oo kumbiyuutarka disk user la kulmi karaan. Sidaas, waxa aad fikrad inuu ka soo kabsado xogta laga kumbiyuutarka disk marka xogta lumay?
Xalka ugu wanaagsan ee aad dib u soo ceshano xogta laga kumbiyuutarka disk ma aha in ay qaab iyo raadiyo barnaamij kumbiyuutarka xogta disk soo kabashada ee Internet-ka si ay kuu caawiyaan. Halkan waa waxa aan jeclaan lahaa in aan ku talinaynaa in aad u: Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac . Tani waa ikhtiyaarkaaga ugu fiican inuu ka soo kabsado files lumay, tirtiray, ama xataa formatted ka disk kumbiyuutarka. Waxaad hadda dib u soo ceshano karaan dhammaan noocyada kala duwan ee xogta laga badiyay ka disk ah kumbiyuutarka, oo ay ku jiraan images iyo waraaqaha files.
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery hoos ku qoran si ay u qabtaan soo kabashada xogta kumbiyuutarka disk ku qasabno dhowr hadda!
Kabsado Xogta laga kumbiyuutarka digsi 3 Talaabooyinka
Si aad u soo kabsado xogta lumay ka disk kumbiyuutarka, aad u baahan tahay si aad u hubiso in aad disk kumbiyuutarka la galin karaa in aad computer iyo aqoonsaday warbaahinta kaydinta ah.
Haddaba ee geedi socodka soo kabsado la Windows version of Wondershare Data Recovery.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabasho
Ka dib markii ay ku rakibidda oo bilaabeyna Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad ka arki kartaa suuqa kala bilaabatay sida image hoos ku qoran.
Halkan inuu ka soo kabsado xogta lumay ka kumbiyuutarka disk, aynu dooro "lumay Recovery File" sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 baarista disk kumbiyuutarka xogta laga badiyay
Markaas suuqa kala barnaamijka lagu ogaan doonaa oo tusi doono oo dhan qoruhu on your computer. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan warqad drive ee aad disk kumbiyuutarka oo guji "bilow" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka.
Fiiro gaar ah: Haddii xogta lumay, maxaa yeelay formatting disk kumbiyuutarka, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho uu furmo.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka kumbiyuutarka disk
Ka dib markii iskaanka, ku jira oo dhan ka helay on your disk kumbiyuutarka lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala barnaamijka. Waxaad ka arki kartaa magacyada file ama Falanqeynta helay images si loo hubiyo in xogta aad badiyay la kama uusan soo kabsan karaan ama.
Markaas oo keliya u baahan tahay in aad dooratid files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga saari Media
Sidee inuu ka soo kabsado ka dib markii Data Hard Drive shil
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Uninitialized digsi
EMTEC Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Device EMTEC Kaydinta
Talaabooyinka inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Faylal ay ka WD My Passport Hard Drive